Iprojekthi eyimpumelelo |
Ukufakelwa komatshini omkhulu ojikelezayo wamavili ojikelezayo
ngomphathi ku 2021-07-05
Uhlobo lwevili lokuComposter Turner Machine sisixhobo esizenzekelayo sokufaka umgquba kunye nokuvundisa ngobude obude kunye nobunzulu bemanyolo yemfuyo, udaka kunye nodoti, udaka lokucoca ulwelo, iikeyiki ezisezantsi ze-slag kunye ne-sawdust ye-mills, kwaye ikwasetyenziswa ngokubanzi ekuvundiseni nasekuphelisweni kwamanzi emzimbeni. ..
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo komatshini oguqula umanyolo
ngomphathi ku 2020-09-22
Umatshini wezichumiso zendalo uneendima ezininzi, sonke kufuneka siwusebenzise ngokuchanekileyo, kufuneka ubenendlela efanelekileyo ngelixa uyisebenzisa. Ukuba awuyiqondi indlela echanekileyo, umatshini oguqula umanyolo unokungabonisi iindima ngokupheleleyo, ke, yintoni ukusetyenziswa okuchanekileyo kwe-t ...
Yintoni ekufuneka iqatshelwe xa usebenzisa igranulator?
Yintoni ekufuneka iqatshelwe xa usebenzisa igranulator? Makhe siyibone. AmaNqaku: Emva kokuba umatshini efakwe ngokweemfuno, kufuneka ubhekise kwincwadana yokusebenza ngaphambi kokusebenzisa, kwaye kufuneka uqhelene nolwakhiwo lomatshini ...
Indlela yokujongana nengxaki isityumzi?
Kwinkqubo yokusebenzisa isityumzi, ukuba kukho impazamo, indlela yokujongana nayo? Kwaye masibone indlela yonyango olungalunganga! I-crusher motor ye-vibration iqhagamshele ngqo kwisixhobo esityumkileyo, esilula kwaye kulula ukusigcina. Nangona kunjalo, ukuba ezi zimbini azixhunyiwe kakuhle ...
Izinto eziluncedo zophuhliso olukhawulezileyo lwezixhobo zezichumiso eziphilayo
Izixhobo zezichumiso zendalo ziyinkunkuma kwiprojekthi yobutyebi, izixhobo zokuchumisa eziphilayo azikho kuphela iindleko eziphantsi zokufaka, kodwa kunye nezibonelelo ezilungileyo zoqoqosho, nokusombulula ingxaki yokungcola kwendalo ngaxeshanye. Ngoku siza kwazisa iingenelo zokukhawuleza ...
Isixhobo semveliso yemveliso yesichumiso sinokunciphisa ngempumelelo ukungcoliseka kwezolimo
Izixhobo zokuvelisa isichumiso somgquba sinokunciphisa ungcoliseko kwezolimo. Ungcoliseko lwezolimo lubangele ifuthe elibi kubomi bethu, indlela yokunciphisa ngokufanelekileyo ingxaki enkulu yongcoliseko lwezolimo? Ungcoliseko lwezolimo lubaluleke kakhulu akukho ...